Enabling Accessibility Mode, via Screen Options, allows you to use Add and Edit buttons instead of using drag and drop. မြင်ကွင်းဆိုင်ရာရွေးစရာများတွင် သုံးစွဲရလွယ်ကူစေသော အခြအေနေကို ဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် တရွတ်ဆွဲ၍ ချထားခြင်းအစား ထည့်ပါနှင့် ပြုပြင်ပါ ခလုပ်များကို သုံးခွင့်ပြုပေးသည်။	 Details
မြင်ကွင်းဆိုင်ရာရွေးစရာများတွင် သုံးစွဲရလွယ်ကူစေသော အခြအေနေကို ဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် တရွတ်ဆွဲ၍ ချထားခြင်းအစား ထည့်ပါနှင့် ပြုပြင်ပါ ခလုပ်များကို သုံးခွင့်ပြုပေးသည်။
2014-09-04 20:11:20 GMT
Widgets may be used multiple times. You can give each widgetatitle, to display on your site, but it&#8217;s not required. ဝစ်ဂျက်များကို ကြိမ်ဖန်များစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝစ်ဂျက်တစ်ခုခြင်းကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားရန် ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော မလိုအပ်ပါ။	 Details
ဝစ်ဂျက်များကို ကြိမ်ဖန်များစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝစ်ဂျက်တစ်ခုခြင်းကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ဖော်ပြထားရန် ခေါင်းစဉ်တပ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော မလိုအပ်ပါ။
If you want to remove the widget but save its setting for possible future use, just drag it into the Inactive Widgets area. You can add them back anytime from there. This is especially helpful when you switch toatheme with fewer or different widget areas. ဝစ်ဂျက်ကိုဖယ်ရှားလိုသော်လည်း အနာဂတ်တွင် သုံးရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို သိမ်းထားလိုပါက အသက်ဝင်မနေသော ဝစ်ဂျက်များ ဧရိယာသို့ တရွတ်ဆွဲချထားပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ထိုနေရာမှပြန်လည်ထည့်ပေးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝစ်ဂျက်ဧရိယာ ပိုနည်းသော သို့မဟုတ် မတူညီသော အခင်းအကျင်းများသို့ ပြောင်းလိုသောအခါ အကူအညီဖြစ်ပါသည်။	 Details
ဝစ်ဂျက်ကိုဖယ်ရှားလိုသော်လည်း အနာဂတ်တွင် သုံးရန်အတွက် သတ်မှတ်ချက်များကို သိမ်းထားလိုပါက အသက်ဝင်မနေသော ဝစ်ဂျက်များ ဧရိယာသို့ တရွတ်ဆွဲချထားပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ထိုနေရာမှပြန်လည်ထည့်ပေးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝစ်ဂျက်ဧရိယာ ပိုနည်းသော သို့မဟုတ် မတူညီသော အခင်းအကျင်းများသို့ ပြောင်းလိုသောအခါ အကူအညီဖြစ်ပါသည်။
Removing and Reusing ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း	 Details
ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ပြန်လည် အသုံးပြုခြင်း
The Available Widgets section contains all the widgets you can choose from. Once you dragawidget intoasidebar, it will open to allow you to configure its settings. When you are happy with the widget settings, click the Save button and the widget will go live on your site. If you click Delete, it will remove the widget. ရရှိနိုင်သော ဝစ်ဂျက်များ အပိုင်းတွင် သင်ရွေးချယ်နိုင်သော ဝစ်ဂျက်အားလုံးပါဝင်သည်။ ဝစ်ဂျက်တစ်ခုကို ဘေးဘားသို့ တရွတ်ဆွဲထည့်ပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးခွင့်ပြုရန် ဖွင့်ပေးသည်။ ဝစ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက်များကို ကျနေပ်လျှင် သိမ်းပါ ခလုပ်ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ သင့်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဝစ်ဂျက်ကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြီးဖြစ်မည်။ ဖျက်ပါ ကို ကလစ်နှိပ်ခဲ့လျှင် ထိုဝစ်ဂျက်ကို ဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။	 Details
ရရှိနိုင်သော ဝစ်ဂျက်များ အပိုင်းတွင် သင်ရွေးချယ်နိုင်သော ဝစ်ဂျက်အားလုံးပါဝင်သည်။ ဝစ်ဂျက်တစ်ခုကို ဘေးဘားသို့ တရွတ်ဆွဲထည့်ပြီးသည်နှင့် ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးခွင့်ပြုရန် ဖွင့်ပေးသည်။ ဝစ်ဂျက်သတ်မှတ်ချက်များကို ကျနေပ်လျှင် သိမ်းပါ ခလုပ်ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ သင့်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ဝစ်ဂျက်ကို တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်ပြီးဖြစ်မည်။ ဖျက်ပါ ကို ကလစ်နှိပ်ခဲ့လျှင် ထိုဝစ်ဂျက်ကို ဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်။
2014-09-04 20:11:18 GMT
Widgets are independent sections of content that can be placed into any widgetized area provided by your theme (commonly called sidebars). To populate your sidebars/widget areas with individual widgets, drag and drop the title bars into the desired area. By default, only the first widget area is expanded. To populate additional widget areas, click on their title bars to expand them. ဝစ်ဂျက်ဆိုသည်မှာ သင့်အခင်းအကျင်းမှထောက်ပံ့ပေးထားသည့် မည်သည့် ဝစ်ဂျက်ထည့်သွင်းရန်နေရာတွင်မဆို (ယေဘုယျအားဖြင့် ဘေးဘားများဟု ခေါ်သည်။) နေရာချထားနိုင်သည့် လွတ်လပ်သော ပါဝင်မှု အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ သင့် ဘေးဘားများ/ဝစ်ဂျက်ဧရိယာများတွင် ဝစ်ဂျက်တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းထားလိုလျှင် ခေါင်းစီးဘားများကို လိုချင်သော ဧရိယာသို့ တရွတ်ဆွဲ၍ ချပေးနိုင်သည်။ မူလ အခြအေနေတွင်၊ ပထမဆုံးဝစ်ဂျက် ဧရိယာသာ ဖြန့်ထုတ်ထားသည်။ နောက်ထပ် ဝစ်ဂျက်ဧရိယာများကို ထည့်လိုလျှင် ၎င်းတို့ကို ဖြန့်ထုတ်ရန် ခေါင်းစီးဘားတန်းများကို ကလစ်နှိပ်ပါ။	 Details
ဝစ်ဂျက်ဆိုသည်မှာ သင့်အခင်းအကျင်းမှထောက်ပံ့ပေးထားသည့် မည်သည့် ဝစ်ဂျက်ထည့်သွင်းရန်နေရာတွင်မဆို (ယေဘုယျအားဖြင့် ဘေးဘားများဟု ခေါ်သည်။) နေရာချထားနိုင်သည့် လွတ်လပ်သော ပါဝင်မှု အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။ သင့် ဘေးဘားများ/ဝစ်ဂျက်ဧရိယာများတွင် ဝစ်ဂျက်တစ်ခုခုကို ထည့်သွင်းထားလိုလျှင် ခေါင်းစီးဘားများကို လိုချင်သော ဧရိယာသို့ တရွတ်ဆွဲ၍ ချပေးနိုင်သည်။ မူလ အခြအေနေတွင်၊ ပထမဆုံးဝစ်ဂျက် ဧရိယာသာ ဖြန့်ထုတ်ထားသည်။ နောက်ထပ် ဝစ်ဂျက်ဧရိယာများကို ထည့်လိုလျှင် ၎င်းတို့ကို ဖြန့်ထုတ်ရန် ခေါင်းစီးဘားတန်းများကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
Other users have been removed. အခြားသုံးသူများအား ဖျက်ပြီး။	 Details
2014-09-04 20:11:22 GMT
You can't remove the current user. လက်​ရှိ​သုံး​သူ​အား​ ​သင့်​ဖျက်​၍​မ​ရ​ပါ​။	 Details
User removed from this site. ဒီဆိုဒ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သော သုံးသူများ	 Details
ဒီဆိုဒ်မှ ထုတ်ပယ်လိုက်သော သုံးသူများ
2014-09-04 20:11:16 GMT
Other users have been deleted. အခြားသုံးသူများအား ဖျက်ပြီး။	 Details
You can&#8217;t delete the current user. လက်​ရှိ​သုံး​သူ​အား​ ​သင့်​ဖျက်​၍​မ​ရ​ပါ​။	 Details
Other user roles have been changed. အ​ခြား​သုံး​သူ​အ​ဆင့်​အ​တန်း​များ​ ​ပြောင်း​လဲ​ပြီး​ခဲ့​ပြီ​။	 Details
The current user&#8217;s role must have user editing capabilities. လက်ရှိ သုံး​စွဲသူရဲ့​ အခန်း​ကဏ္ဍမှာ သုံး​စွဲသူ တည်ဖြတ်မှု လုပ်နိုင်စွမ်း​များ​ ရှိရမယ်။	 Details
လက်ရှိ သုံး​စွဲသူရဲ့​ အခန်း​ကဏ္ဍမှာ သုံး​စွဲသူ တည်ဖြတ်မှု လုပ်နိုင်စွမ်း​များ​ ရှိရမယ်။
Changed roles. အဆင့်အတန်းများ ပြောင်းပြီးပြီ။	 Details
New user created. သုံးသူအသစ် စာရင်းသွင်းပြီး။	 Details